विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विज्ञान प्रदर्शनी गर्दछौं | RevoScience Nepali
Home /विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विज्ञान प्रदर्शनी गर्दछौं
भोलिदेखि दुईदिने सातौं विज्ञान प्रदर्शनी तथा करिअर मेनेजमेन्ट साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा हुने भएको छ ।
हरिसिंह केसी, भाइस प्रिन्सिपल, साउथ वेस्टर्न केलेज
वसुन्धरास्थित साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा माघ २० र २१ गते सातौं विज्ञान प्रदर्शनी हुँदैछ । प्रदर्शनीमा राजधानीका विभिन्न कलेज तथा स्कुलका विद्यार्थीले बनाएका ड्रोन, रोबोट, इलेक्ट्रोनिक सामग्री राखिने कलेजका भाइस प्रिन्सिपल हरिसिंह केसी बताउँछन् । सातौ प्रदर्शनीसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीको शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक सीप विकास भएको केसीको बुझाइ छ । करिब ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत साउथ वेस्टर्नमा साढे ३ सय शिक्षकले पूर्ण तथा आंशिक रूपमा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । विद्यार्थीको प्रयोगात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदर्शनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन् । यसै सेरोफेरोमा कलेजका भाइस प्रिन्सिपल केसीसँग रिभोसाइन्सले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना किन गरिएको हो ?
–यो सातौं विज्ञान प्रदर्शनी तथा करिअर म्यानेजमेन्ट हो । यसको मुख्य उद्देश्य विभिन्न कलेज तथा स्कुलका विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने हो । विद्यार्थीमा रहेको सिर्जनात्मक प्रतिभा प्रस्फूटन गराउने प्रदर्शनीको उद्देश्य हो ।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उनीहरूसँग भएको कौशलता अभिभावक तथा विद्यार्थीमाझ प्रदर्शन गराउने हो । प्रदर्शनीमार्फत् विद्यार्थीमा रहेको क्षमतामा निखारपाना बढाउने मद्दत मिल्ने हुन्छ । सरकारले स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीको लागि विज्ञान गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेकाले विज्ञानको जमघट गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको हो । निजी क्षेत्रले गरेका यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको जिज्ञासा मेट्न मद्दत मिल्छ ।
प्रदर्शनीमा कस्ता खाले सामग्री राखिन्छ ?
विद्यार्थीले बनाएका ड्रोन, इलेक्ट्रोनिकका सामग्री, सोलारबाट चल्ने, वातावरण संरक्षणका किताब र विभिन्न खाले प्रविधि प्रयोग भएका सामग्री हुनेछन् ।
साउथ वेस्ट्रन कलेजबाहेक अन्य पनि सहभागी हुन्छन् ?
साउथ वेस्ट्रन, गोल्डेनगेट, नासा, सिद्धार्थ बनस्थली, केएमसी, ट्रिनिटीलगायत विभिन्न विद्यालय तथा कलेजका करिब ४० स्टल राखिने भएको छ । तीबाहेक त्रियोग, साउथ वेस्ट्रन, चाँदबागलगायत विद्यालयले पनि उत्कृष्ट विज्ञान सामग्रीसहित सहभागी जनाउँदैछन् । अमेरिकी दूतावासका केही स्टल र विज्ञान सम्बन्धी केही संस्थाले सहभागिता जनाउने कुरा गरेका छन् ।
मुख्य आकर्षण के रहने छ ?
विद्यार्थी स्वयंले परिकल्पना गरेको सामग्रीलाई ध्यान दिएका छौं । उनीहरूले नयाँखाले परिकल्पनाको मूर्त रूप दिने खालको सामग्री राख्नुपर्दछ ।
प्रर्दशनीमा स्टलबीच प्रतिस्पर्धा नि हुन्छ?
प्रदर्शनीमा स्टल राखेका उत्कृष्ट स्कुल तथा कलेजलाई छुट्टाछुट्टै पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं । यसले उनीहरूको मनोबल बढाएको पाएका छौं ।
उपत्यकाबाहिरका कलेज पनि आउँछन् ?
पहिलो वर्ष उपत्यका बाहिरका कलेजलाई पनि सहभागी गराएका थियौं । तर, उपत्यकाबाहिरका स्कुल कलेज यहाँसम्म आउन विभिन्न प्राविधिक समस्या देखा प¥यो । चुस्त व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं ।
विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गर्न कतिको कठिन आउँछ?
निरन्तर आयोजना गर्न विभिन्नखाले चुनौती छन् । विज्ञान प्रदर्शनीमा स्कुल तथा कलेजलाई सहभागी हुनुपर्दछ भन्ने जानकारी भइसकेको छैन । कतिपय विद्यालय तथा कलेजले निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था छ । सरकारी तवरबाट कुनै किसिमका सहयोग पाइँदैन । सबै आफ्नै स्रोत साधनमा भर पर्नुपर्दा निकै गाह्रो हुन्छ । स्टल निर्माणदेखि लिएर अन्य विभिन्न कुरा खर्च हुन्छन् । कलेज तथा विद्यालयको तहमा सहभागीको प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि सहभागिता जनाउन गाह्रो भैरहेको छ । हरेक वर्ष नयाँ खालका नमुना सामग्री प्रदर्शनी गराउन पर्ने भएकोले जुटाउनै गाह्रो हुन्छ । शिक्षकले पनि राम्रोसँग मार्गदर्शन गराउन नसकेको अवस्था छ । उनीहरुको कौशलता पनि विकास गर्नुपर्ने देखेका छौं ।
विद्यार्थीको रुचि कस्तो पाउनुभएको छ ?
क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । विभिन्न विधामा पाइन्छ । उनीहरूले स्टल सजावटदेखि नयाँखाले कन्सेप्ट प्रयोग पर्दा मिहिनेत गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थीले आफ्नै खर्चबाट प्रदर्शनीमा राख्ने सामग्री निर्माण गरेको पाइन्छ ।
विद्यार्थीको पठनपाठनमा कतिको असर गर्छ ?
यस्ता शैक्षिक क्रियाकलापले पठनपाठनमा असर गर्दैन । बरु मद्दत मिन्छ । विद्यार्थीले नयाँ–नयाँ कुरा सिक्न पाउँछन् । सामग्री निर्माण गर्दा झन दिमाग लगाउनुपर्दा उनीहरुको दक्षता बढेको पाएको छु ।
प्रदर्शनीमा सरकारी तवरबाट केकस्ता सहयोग आवश्यक हुन्छ ?
धेरैथोरै आर्थिक सहयोग हुनुपर्छ । अर्को, प्रशंसास्वरुप कदरपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । हौसला मिल्ने खालको वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । सरकारले विज्ञान प्रविधिमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
कतिले प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ ?
गत वर्ष २० हजार हाराहारी सहभागी थिए । यस वर्ष त्योभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ ।
कुन–कुन क्षेत्रको विद्यार्थीको सहभागिता हुन्छ ?
विशेषतः उपत्यकाको उत्तरी भेगका हुन्छन् । बूढानीलकण्ठ, सामाखुशी, नयाँबजार, कलंकी, चाबहिल, तीनकुनेलगायत क्षेत्रका स्कुल/कलेजका विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् ।
प्रर्दशनीबाहेक अन्य कार्यक्रम केके हुन्छ ?
प्रदर्शनीबाहेक रक्तदान कार्यक्रम हुन्छ । मनोरञ्जन कार्यक्रम हुन्छ । करिअर म्यानेजमेन्टलाई उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम पनि हुन्छ । करिअर म्यानेजमेन्टको पाटोमा अमेरिकी दूतावासले विभिन्न विज्ञ बोलाउने भएको छ ।
कलेजले अन्य केके गतिविधि गर्दै आएको छ ?
देशभरका ६० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाएका छौं । विद्यार्थीका लागि शैक्षिक नेतृत्व विकासको कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका सेमिनारमा सहभागी गराउँछौं । विभिन्न समयमा विद्यार्थीलाई मौखिक तथा लिखित प्रस्तुति गराउँदै आएका छौं । यसले उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा टेवा पु¥याउँछ ।